आज देखि सुरु हुने टी-२० विश्वकपबारे सम्पूर्ण जानकारी - Nepal Cricket
आज देखि सुरु हुने टी-२० विश्वकपबारे सम्पूर्ण जानकारी
युएई र ओमानमा आज(आइतबार)देखि आईसीसी टी-२० विश्वकप क्रिकेट सुरु हुँदैछ । आइतबारबाट सुरु हुने विश्वकप कोरोना महामारीका कारण भारतबाट प्रतियोगिता यूएई र ओमानमा सारिएको हो ।
कहिले देखि कहिलेसम्म?
५ वर्षको अन्तरपछि अन्तत: आइतबार देखि टी-२० विश्वकप सुरु हुँदैछ । पहिलो दिन दुई खेल हुँदैछन् । पहिलो चरण अन्तर्गत ओमानको अल अमारतमा हुने पहिलो खेलमा ओमानले पपुवा न्युगिनीको सामना गर्नेछ । उक्त खेल दिउँसो ३:४५ बजे सुरु हुनेछ ।
यस्तै दोस्रो खेलमा बंगलादेश र स्कटल्याण्डबीच अल अमारत क्रिकेट मैदानमा नै हुनेछ । उक्त खेलमा ७:४५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
विश्वकप नोभेम्बर १४ सम्म चल्नेछ । वेष्ट इन्डिजले २०१६ मा अन्तिम संस्करण जितेपछि ५ वर्षपछि अर्को टी-२० विश्वकप हुन लागेको हो । यसबीच कोरोना महामारीका कारण प्रतियोगिता हुन सकेको थिएन ।
यस संस्करणको आयोजक आइसीसी आफै हो तर खेलहरु यूएई र ओमानमा खेलहरु हुनेछन् । यसअघि भारतमा प्रतियोगिता हुने भनिएको थियो तर कोरोना महामारीका कारण भारतबाट प्रतियोगिता यूएई र ओमानमा सारिएको हो ।
प्रतियोगितामा १६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतियोगिता दुई राउण्डमा खेलाइनेछ । पहिलो राउण्डमा ८ टोली हुनेछन् । जसलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
समूह ए : श्रीलंका, आयरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, नामिबिया
समूह बी : बंगलादेश, स्कटल्याण्ड, पपुवा न्यू गिनी, ओमान
समूहमा सबै टोलीले एक अर्कासँग खेलेपछि दुवै समूहका शीर्ष २ टोली अर्को राउण्डमा प्रवेश गर्नेछन् । जसलाई सुपर १२ भनिन्छ । जहाँ शीर्ष वरियताका टी-२० टोलीहरु छन् । सुपर १२ मा पनि दुई समूहमा टोलीहरुलाई बाडिनेछ ।
समूह ए : इंग्ल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, साउथ अफ्रिका, वेष्ट इण्डिज, पहिलो राउण्डका दुई टोली (A1 र B2)
समूह बी : भारत, पाकिस्तान, न्यूजिल्याण्ड, अफगानिस्तान, पहिलो राउण्डका दुई टोली (B1 र A2)
फेरि, यी टोलीहरुले एक अर्कासँग खेलेपछि शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् ।
म्याच टाइ भएपछि के हुन्छ?
दुबै टोलीको बराबरी स्कोर(टाइ) भएपछि खेल सुपर ओभरमा पुग्नेछ । सुपर ओभर पनि टाइ भएपछि एउटा टोलीले नजित्दासम्म अर्को सुपर ओभर खेल्दै जाने फर्म्याट छ । यदि मौसम अन्य कारणले सुपर ओभर सम्भव नभए अंक बाडिनेछ।
यदि सेमिफाइनलमा पनि रिजल्ट ननिस्कियो भने सुपर १२ मा अगाडि रहेको टोली फाइनलमा पुग्नेछ । फाइनलमा पनि रिजल्ट ननिस्किए दुवै टोलीलाई संयुक्त विजेता घोषणा गरिनेछ ।
उपाधि दाबेदार टोली
यस संस्करणको उपाधि दाबेदार टोलीका रुपमा इंग्ल्याण्डलाई लिइएको छ । त्यसबाहेक साविक विजेता वेष्ट इण्डिज र भारतलाई पनि शशक्त टोलीका रुपमा हेरिएको छ र न्यूजिल्याण्ड र पाकिस्तानलाई पनि हल्कामा लिन सकिदैँन ।
विजेताले के पाउँनेछ?
प्रतियोगिताकका लागि कुल ५.६ मिलियन अमेरिकी डलर पुरस्कार रकम छुट्टाइएको छ । विजेताले १.६ मिलियन डलर पाउनेछ भने उपविजेता टोलीले ८ लाख डलर हात पार्नेछन् ।
यस्तै सेमिफाइनलमा पराजित हुने टोलीले समान ४ लाख अमेरिकी डलर तथा शीर्ष १२ मा पुगेर नकआउट हुने ८ टोलीले समान ७० हजार डलर पुरस्कार पाउनेछन् ।
सुपर १२ मा पुग्ने टोली र पहिलो राउण्डबाट बाहिरिने टोलीले समान ४० हजार डलर पाउनेछन् ।
इंग्ल्याण्डमाथि भारतको सानदार जित, पन्तले छक्का प्रहार गर्दै जिताए खेल